Dhaqtar sida dib-jirta u labista si uu bilaash ugu dabiibo darbi-jiifta ku nool Maraykanka! | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Wararka August 2, 2017	0 170 Views
Washington (Himilonews) – In ka badan 20 sano, Dr. Jim Withers wuxuu ku socdaalayaa jidadka Pittsburgh ee Pennsylvania – isaga oo kusii jeeda meelaha dib-jirtu gabaadsato, siiyana baxnaano, daweyn iyo daryeel caafimaad. Wuxuu samafalkiisa ugu yeeraa ‘dawada jidka’.
Previous: Ma dhabbaa in Muuska laga qaado caafimaad-darro?!
Next: Nin weeraray Taallada Ataturk kuna sheegay Sanam diinteennu diiday!